Dooda Jimcaha - BBC Somali
Toddobaadkan waxaa magaalada Slough ee dalkan Ingiriiska lagu qabtay dood ku saabsan sida loola dhaqmo dadka Madow ee dalkan u soo haajiray si ay shaqooyin iyo nolol wanaagsan uga helaan. Waxaa uu barnaamijkani qayb ka yahay barnaamijyo taxane ah oo BBC-du uga hadlaysay siyaasadaha dowladda Britain ee ku aaddan dadka soo galowga ah iyo sida dadweynaha Britain u arkaan dadka madow ee soo galowgaah. Xubnaha doodda ka qayb gelaya waxaa ka mid ah:
Qareen Kaahiye Maxamed Axmed Caalin oo arrimaha socdaalka ku takhasusay.
Ganacsade Cabdirashiid Maxamed Saciid oo ah maareeyaha guud ee Dahabshiil.
Feysal Cashuur oo ka mid ah madaxda mujtamaca Soomaalida ee magaalada Slough iyo Sucaada Xuseen oo reer Slough ah, kana shaqeysa daryeelka dadka waayeelka ah, iyo dadka kale oo isugu jira haween rag iyo dhallinyaro intaba oo magaaladaas ku nool.